‘मलाई छातीमा पेस्तोल ताके’ भनेर सांसद निरुपालले सरकारलाई ढाँटेकै हुन् त ? « Light Nepal
Published On :6August, 2018 1:02 pm
संचार संस्थामा आवद्ध भएको तीन वर्ष पछि गएको बुधवार पहिलो पटक संसद भवन भित्र रिपोटिङ्गको लागि जाने मौका पाँए । म फोटो पत्रकार भएका कारण म कार्यरत संस्था लाइट नेपालका सम्पादकसंग संसदिय रिपोटिङ्गको लागि पहिलो पटक संसद भवन भित्र छिरें ।
फोटो पत्रकारलाई संसद भवनको तल्लो तलामा नै उभिने ब्यवस्था रहेछ । त्यसैले म तल भए दिदी माथि हुनुभयो । सोही बेलामा संसदमा एक साना सांसद विशेष समयमा बोलिन् उनी थिइन् सांसद निरु पाल । त्यतिवेला उनको बारेमा निकै चर्चा भइरहेको थियो ।
कारण उनलाई काठमाडौंको ब्यस्त वजार बानेश्वर चोकमा पेस्तोतधारीले छातीमै पेस्तोल ताकेर मार्ने धम्की दियो । उनीसंग भएको मोवाइल पनि खोसेर लग्यो ।
लेखक: रिना शाह
सो घटना पछि उनलाई पिएसओको सुविधा पनि दिएको थियो । उनले संसदमा आफ्ना कुरा तीन मिनेट राखिन् । त्यस्ता पेस्तोलधारीसंग आफु नडराउने भन्दै निकै निडर श्वरमा बोलिन् । आफुलाई पेस्तोल देखाएर सरकारलाई चुनौती दिन खोजेको हो भने त्यो दिवास्वप्न मात्र हुने भन्दै चुनौती दिइन् । पेस्तोल गाडेको छातीमा अझै पनि दाग रहेको र त्यहाँ आफुलाई पोलीरहेको बताइन् ।
तर त्यो घटना भएको एक साता भन्दा बढी बितिसकेको छ प्रहरीले ९० जना भन्दा बढीलाई पक्राउ गरेर छानविन गरीसकेको छ । तर माक्स पनि नलगाएको भनिएका पेस्तोलधारी अझै पक्राउ परेका छैनन् । सरकारले शान्ति सुरक्षा मजबुत छ भनेर बताइरहेको बेलामा भएको यस्तो घटनाले सुरक्षा संयन्त्रले पक्कै पनि चुनौती महशुष गरेको हुनुपर्छ । त्यस माथि निरु पाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छोरी । उनीहरु दुवैले एक अर्कालाई बाबु छोरी भन्छन् ।
तर ति ब्यक्ति अझ पत्ता लाग्दैन । के सांच्चै त्यो घटना भएकै हो त रु त्यो दिन देखि मेरो मनमा यो प्रश्न उब्जीरहेको छ । अहिले संचार माध्यममा आएका समाचार देखेर प्रहरी प्रशासनलाई पनि मेरै मनमा आएको जस्तो प्रश्न आएको थाहा पाएँ ।
यदि त्यसो हो भने निरु पालको हिम्मतलाई मान्नै पर्छ । मैले आफ्नै घरमा मेरै परिवारका सदस्यसंग सानो झुट बोल्दा त निकै थर्कमान हुनुपर्छ । झुट कतिबेला समातिने हो भनेर कतिदिन निन्द्रा लाग्दैन । तर निरु पालले त राज्यका सामु म माथि यस्तो घटना भयो भनेर भनिरहेकी छन् । एउटा महिलाले यो देशका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र पुरै राज्यसंग कसरी झुट बोल्न सकिन् ? बोलिन् भने पनि के को लागि बोलीन् ?
यो विषय म जस्तो सामान्य ब्यक्तिलाई त सामान्य लागेको छैन भने राज्य संयन्त्रले पनि सामान्य रुपमा लिनुहुँदैन । अहिले सम्म अपराधि पत्ता लगाउन नसकेर निरु पाल तर्फ अनुसन्धानको नजर लगाएको प्रहरीले सत्य वाहिर ल्याउनै पर्छ । होइन भने हामीले भोट दिएर जिताएका नेताले हाम्रो कमाइको राजश्व खाएर हामीलाई नै झुटको खेती गर्ने अधिकार दिइनु हुँदैन ।
दाङ : पुजारीले नै रोक्न थाले बालविवाह
दाङ, फागुन ५ । पुजारीले मन्दिरमा उमेर नपुगी विवाह गर्न आएका जोडीको विवाह रोक्दै आएका
बाँके, फागुन ५ । दाउते इस्लामी नेपालको आयोजना नेपालगन्जमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको मुस्लिम धार्मिक प्रचवन कार्यक्रम जारी
मनकामना केबलकारमा चट्याङले क्षति, आज दिनभर नचल्ने
काठमाडौं, फागुन ५ । मनकामना केबलकार आज सञ्चालन नहुने भएको छ । गएराति परेको चट्याङले
पशुपतिको गीत युट्युबबाटै हटेपछि कसले के